Soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha qalabka shixnadaha iyo alaab -qeybiyeyaasha Shiinaha GBM
Nidaamka Burburka Dhagaxa
Taxanaha Fidiyaha Weelka
Weelka Rotary loader & qalabka dajiyaha
Fidiye Semi-automatic ah
Fidiyaha telescopic ee korontada-korontada
Fidiyaha gaarka ah
Qabsashada Qolofta Oranto-Haydarooliga
Qabsashada Electro-Hydraulic Clamshell
Xakamaynta fog ee Wireless Qabso
Jumladaha Xamuulka Xamuulka ee xamuulka ah
Hopper nooca la dhaqaajin karo
Hopper nooca boodhka ah
Wiishka saqafka sare ee jugta leh
Wiishka badda oo aad u adag
Wiishka La Adeegsaday
Gacan -hayaha maareynta alaabta Haydarooliga
Maareeyaha walxaha hiddo -hayaha ee go'an
Maareeyaha walxaha Haydarooliga ee taayirka
Weelka korontada ku shubta & qalabka dajiyaha
Wiishka la isticmaalay
Telescopic wiish badda badda
Wiishka dheelitirka Haydarooliga ayaa go'an/guurguura oo leh qabasho/jillaab
Excavator oo taageeraya baaldi haaf -biyoodka ah
Qabasho aan caddayn
Qabsashada diirka liinta ee korontada
Weelka GBM Qalab -fuulaha Rotary & ka -dejiyaha wuxuu ka kooban yahay laba nooc oo qalab ah: weel bulk gaar ah iyo rar -roge. Taxanaha weelka waxaa ka mid ah: weel sare oo furan; weelka albaabka ee furan; weelka caadiga ah ee caalamiga ah.
Isbeddelka ku -socodka xamuulka badan ee sahayda weelka ayaa ah isbeddellada wakhtiyada waana lama huraan. Dhibaatada ugu weyn ee dhiirrigelinta arjiga waa hufnaanta raridda iyo dejinta weelka. Iyada oo ku saleysan cilladaha qulqulka xamuulka bulk ee dhaqameedka ah, waxaan abuurnay oo soo saarnay nooc cusub oo ah rarka xamuulka culeyska weyn ee weelka iyo soo dejinta, kaas oo xaqiiqsaday isbeddel hoosaad cagaaran, bey'adda u fiican oo hufan oo ku jira rarka iyo dejinta weelka. Waxay bixisaa dammaanadda ugu habboon oo la isku halleyn karo ee loogu talagalay adeegsiga weelka hadhuudhka, dhuxusha, macdanta, muck, iwm, waxaana si ballaaran loogu adeegsan karaa goobta saadka ee gaadiidka tirada badan ee weelka.
Waxay xaqiijin kartaa 360 wareejinta wareejinta iyo dejinta, waxayna dajin kartaa weel 2 daqiiqo gudahood. Waxay si buuxda u xallisaa dhibaatada aan fiicnayn. Marka la barbardhigo qalabka wax lagu gaarsiiyo, waxay leedahay faa'iidooyin badan oo shaqooyin shaqo ah, hufnaan shaqo oo sareysa, keydinta tamarta, iyo badbaado iyo isku haleyn badan.
Qalabka xamuulka ee weyn ee aan soo saarnay wuxuu leeyahay faa'iidooyin u gaar ah aagagga saadka sida dekadaha, jidadka tareenka, awoodda kuleylka, dhalaaleynta iyo daadinta tareenka dhulka hoostiisa mara. Waxaa qaatay shirkado badan oo logistics caan ah. Marka la barbardhigo hab -dhaqameedka, hufnaanta hawlgalka ayaa labanlaabantay, kharashkii wax -ka -qabashada si weyn ayaa loo dhimay, faa'iidooyin dhaqaale oo dhammaystiranna waa la gaaray.
Hore: Maareeyaha walxaha Haydarooliga ee nooca taayir2
Xiga: Kantaroolka fog ee wireless -ka
Wiishka sagxadda oo leh awood fidiyaha wareejisa
Taleefan: 0086 18221720746
Cinwaanka: SHANGHAI GUANBO MACHINERY QALABKA QALABKA CO., LTD
Right Xuquuqda daabacaadda - 2018-2021: Dhammaan Reserved Rights. Alaabta La Soo Bandhigay - Khariidadda bogga
candhuufta telescopic wiishka boom, wiishka sagxadda, Wiishka Dheelitirka, wiishka badda, wiishka Haydarooliga, wiish kalluumeysi, Dhammaan Alaabta